Hopitalibe Toamasina : Zaza iray indray no matin’ny kitrotro -
AccueilSosialyHopitalibe Toamasina : Zaza iray indray no matin’ny kitrotro
05/01/2019 admintriatra Sosialy 0
Efa tena valanaretina mihitsy ny kitrotro satria mitombo hatrany ny isan’ny olona voa, na zaza izany, na olon-dehibe. Amin’izao fotoana izao, velon-taraina tanteraka ny mponina any Toamasina I, fa tena tsy voafehin’ny tompon’andraikitry ny fahasalamana intsony ny toe-draharaha. Ny olana ihany koa, tsy mety milaza ny tena zava-misy amin’ny vahoaka ny tompon’andraikitra. Raha ny tatitra nomena ny minisitera efa roa herinandro izay, dia olona miisa 336 no voan’ny kitrotro any an-toerana, ary azo inoana fa efa mitombo lavitra be io tarehimarika io ankehitriny. Mampisavorovoro ny sain’ny olona any koa amin’izao fotoana izao, ny filazana fa maro be ny zaza namoy ny ainy vokatr’ity areti-mandoza ity. Tsy fantatra mazava moa ny tena isan’ireo namoy ny ainy, fa raha ny vaovao voaray dia ao amin’ny fokontany Depot Analankininy sy fokontany Verrerie no betsaka izany. Ny loharanom-baovao, izay mbola nanamafy fa zaza iray herintaona sy 8 volana no namoy ny ainy teo ampofoan-dreniny niandry mpitsabo, tao amin’ny “pédiatrie” amin’ny hopitalibe Toamasina, ny antoandron’ny alakamisy teo, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany, ary voamarina fa tena aretina kitrotro no namoizana ny ain’ilay zaza. Etsy ankilany anefa, tsy manda ny fisian’ireo olona maty ireo ny tompon’andraikitry ny fahasalamana any an-toerana rehefa nanontaniana vaovao. Nilaozan’izy ireo nifanilika andraikitra fotsiny, ary narirariran’izy ireo teo ny vaovao. Fantatra hatrany fa marary 15 amin’ny 40 mamonjy tobim-pahasalamana ao amin’ny CSB Ankirihiry isan’andro dia kitrotro avokoa, hoy ny Médecin Inspecteur, Dr Zara Hassanaly Patrick.
Tsy maharaka ny mpitsabo
Raha ny hita ao amin’ny tambajotran-tserasera “facebook”, dia mampitaraina ireo manana zanaka marary any an-toerana ihany koa ny tsy fahampian’ny mpitsabo mandray ireo tsy salama ao amin’ny hopitalibe Toamasina voalohany. Feno hipoaka zaza mararin’ny kitrotro ny hopitaly. Filaharana ny fanantonana ny mpitsabo hatrany amin’ny toerana fividianana fanafody. Raha ny vaovao voangona dia mpitsabo mpanampy 3 ihany mandray marary manodidina ny 300 eo ho eo. “Zanakay marary ato amin’ny hopitalibe. Feno zaza mararin’ny kitrotro ato. Tena vitsy dia vitsy ny mpitsabo mpanampy nefa an-jatony maro ny zaza marary. Tena tsy maharaka ry zareo ka mba vonjenareo tompon’andraikitra any fa ny zaza sasany sempotra, ny sasany mifanintona, ny sasany tsy mahatsiaro tena mbola milahatra tsy mety voaray. Mba jerenareo tompon’andraikitra ambony ao azafady, tena milela-paladia tompoko ô!”, hoy ny fitarainan’ny renim-pianakaviana iray tena efa very hevitra tao amin’ny tambajotran-tserasera sosialy. Etsy andaniny, miangavy ny tompon’andraikitra mahefa ao Toamasina mba hanasazy ireo Ray aman-dReny tsy manaiky ny zanany atao vaksiny ny olona sasany any an-toerana fa ireny no voalaza fa antony mampirongatra ny aretina. “Fantatra fa manao ezaka mafy ireo mpiasan’ ny fahasalamana mitety tokantrano tsirairay mba hatao vaksiny ny zaza isaka ny fokontany. Maro amin’ny Ray aman-dReny eto an-tanàna anefa no tsy manaiky izany, ary tsy manatona tobim-pahasalamana akory ho fiarovana ny zanany amin’ny alalan’ny fanaovana vaksiny. Vokatr’izay dia mora voan’ny aretina ny zaza tsy vita vaksiny, ka manaparitaka izany manerana ny tanana”, hoy ny olona sasany. Manentana ny Ray aman-dReny mba hitondra ny zanany atao vaksiny ara-potoana ny tompon’andraikitry ny fahasalamana. Tsara ho fantatra ny rehetra fa amin’ny tapak’ity volana ity no hanaovana ny vaksiny faobe manerana ny Nosy, ary amin’ny 14 janoary hatramin’ny 18 janoary ho avy izao ny ao Toamasina.